Beesha caalamka oo War kulul ka soo saartay Xaaladda Soomaaliya.
Beesha Caalamka 06 Abriil 2021
– Iyadoo ay Soomaalidu u diyaar garoobayaan soo dhaweynta Bisha Barakeysan ee Ramadaan, Beesha Caalamigu waxay muujinayaan rajo ah in mabaadi’da aasaasiga ah ee milicsiga, dulqaadka, Iscafinta iyo dib-u-heshiisiintu ay u horseedi doonaan guul shir madaxeed oo ay yeeshaan hoggaamiyeyaasha Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah Federaalka.
Xuseyna muhiimadda uu leeyahay Shir-madaxeedka la qorsheeyay ee DFS-DXDF, Saaxiibada Caalamku waxay ku boorrinayaan in wada hadalakan ay hormuudka ka tahay Soomaalida isla markaana ay Soomaali leedahay uu horseed u noqon doonto xallinta dhammaan arrimaha taagan iyo in la oggolaado hirgelinta geeddi-socodka doorashooyinka ee 17 Sebtember. Heshiiska noocan oo kale ah, oo astaan u ah midnimada, u damqashada iyo daryeelika dadka kale, wuxuu muujinayaa hoggaan iyo danayn ummadda Soomaaliyeed isla markaana waxuu u noqon doonaa hadiyad bisha Ramadaan u gaar ah dadka Soomaaliyeed.
Dhinaca kale, dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay go’an tahay, kuna dadaalayso sidii uu u miri dhali lahaa kulamada wadatashiga ah ee socda dawladda iyo dawladaha xubmaha ka ah dawladda federal ka.
Wasiirka Warfaafinta Somaliya, Cisman Abukar Dubbe ayaa SONNA u sheegay in rajada kullanka laga qabo in uu ku dhamaanayo isfahan buuxa 100%
« Madaxweyne Qoor Qoor oo gaaray Furimaha Dagaalka (Sawiro)
Shirkii Wadahadalada labada dhinac oo Maanta dib Loo Ambaqaadayo. »